आयोजक र सेन्ट्रल कलेज भरतपुर सेमिफाइनलमा – Khel Dainik
आयोजक र सेन्ट्रल कलेज भरतपुर सेमिफाइनलमा
हेटौडा (खेलदैनिक) । आयोजक बिजय युथ क्लब र सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब जारी भिडोल प्रथम हेटौडा गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
आइतबार हेटौडा स्थित फरेष्ट्री क्याम्पसको खेलमैदानमा भएको पहिलो खेलमा भरतपुरले एफसी रियाले, काठमाडौंलाई ४–१ ले हरायो । भरतपुरको जितमा जोन ग्लोरीले ह्याट्रिक गरे । ग्लोरीले खेलको ३५, ३७ र ६९औं मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । यद्यपि भरतपुरका लागि गोलको खाता भने १८औं मिनटमा रञ्जित आले मगरले खोलेका थिए ।
उता एफसी रियालेका लागि ५७औं मिनटमा रञ्जित तिवारीले एक मात्र सान्त्वना गोल गरेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच भरतपुरका ह्याट्रिककर्ता जोन ग्लोरी नै घोषित भए । उनले पुरस्कार वापत नगद ५ हजार प्राप्त गरे । साथै यो जितसँगै भरतपुरले सेमिफाइनलमा माघ २० गतेका दिन हर्दी युवा समाज, राप्तीसँगको भेट पनि पक्का गरेको छ ।
आयोजकसँग सर्लाही निराश
त्यस्तै प्रतियोगितामा सोझै बाई पाएर क्वाटरफाइनल खेलेको आयोजक बिजय युथ क्लबले सर्लाही जिल्ला फुटबल संघलाई २–० ले हरायो । आयोजकका लागि खेलको छैटौं मिनटमै अफ्रिकी खेलाडी साहिदले पहिलो गोल गरेका थिए भने ७२औं मिनटमा हिसुब थपलियाले दोस्रो गोल गर्दै आयोजकको जित पक्का गरेका थिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच आयोजकका बिमल राना घोषित भए । रानाले पनि पुरस्कार वापत नगद ५ हजार हात पारे । अब सेमिफाइनलमा आयोजकले माघ २१ गतेका दिन सोमबार हुने दुधौली स्पोर्टस क्लब, सिन्धुली र बागमती युवा क्लब, सर्लाहीबीचको अन्तिम क्वाटरफाइनल विजेतासँग भिड्नेछ ।
विजय युथ क्लब, हेटौडाको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ३ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले १ लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने यहि माघ २३ गतेका दिन हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुदिप राजवाहकले बताए ।
← लिगतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो पुलिस मेयर कपः वार्ड नम्बर ३ क्वाटरफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ १८, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ १८, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ १८, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ १८, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ १८, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ १८, २०७७